Elafibranor (GFT505) Fangaro - Ny zava-mahadomelina vaovao ho an'ny fitsaboana fitsaboana NASH
Jolay 23, 2019
Inona ny atao hoe Elafibranor (GFT505)?
Elafibranor (GFT505) vovony (923978-27-2), dia fanafody fanandramana izay mbola mitohy ny fikarohana. Amin'ny ankapobeny, ny fianarany sy ny fivoarany avy amin'i Genfit dia mifototra amin'ny fahombiazan'ny Elafibranor (GFT505) vovoka (923978-27-2) amin'ny ady amin'ny aretina toy ny aretin'ny tavy tsy misy alikaola, dyslipidemia, fanoherana ny insuline, ary diabeta.
Elafibranor (GFT505) fomba fiasa
Elafibranor (GFT505) vovoka dia fitsaboana am-bava izay miasa amin'ireo subtypes PPAR telo. Anisan'izany ny PPARa, PPARd, ary PPARg. Na izany aza, miasa amin'ny PPARa ny ankamaroany.
Ny fomba fiasa Elafibranor dia sarotra satria mampiavaka ny cofactors amin'ny receptor nokleary. Vokatr'izany dia mitarika amin'ny fibaikoana tsy fitovizan'ny fototarazo ary koa ny vokatra biolojika.
Elafibranor (GFT505) vovoka dia afaka mamantatra sy mametaka ny hetsika modulator receptor nokleary (SNuRMs) voafantina. Vokatr'izany dia manome fahombiazana mihatsara miaraka amin'ny fihenan'ny voka-dratsy.
Ny molekiola multimodal sy pluripotent dia samy nanaporofo fa mahomby amin'ny ady amin'ny toe-javatra maro samihafa. Anisan'izy ireo ny fanoherana ny insuline sy ny diabeta, ny fihanahana, ny hatavezana, ary ny triad lipid, izay aseho amin'ny fitomboan'ny kolesterola HDL ary ny fampidinana ny kolesterola LDL sy ny triglycerides.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny mekanisma ataon'ny Elafibranor sy ny an'ny fitambarana hafa izay mikendry ny PPAR ao amin'ny NASH (steatohepatitis tsy misy alikaola) dia ny tsy fisehon'ny hetsika PPARy ara-panafody.
Vokatr'izany, Elafibranor ireo mpampiasa dia tsy mahatsapa fiantraikany amin'ny lafiny tsy ilaina izay mifandray amin'ny fampahavitrihana PPARy. Ny vokatr'izany dia misy; Ny fitazonana ny tsiranoka, edema ary ny lanjany dia mahazo izay rehetra mampitombo ny loza ateraky ny tsy fahombiazan'ny fo.
Elafibranor (GFT505) ho an'ny fitsaboana fitsaboana Nash
Nash (steatohepatitis tsy misy alikaola) dia aretin'aty izay mitarika amin'ny fivontosana sy ny fihenan'ny hepatita ary koa ny fanangonana tavy izay fantatra koa amin'ny hoe lipida mitete. Matetika, ny toe-pahasalamana sasany toy ny metabolic syndrome, diabeta type 2, ary ny hatavezina dia antony voalohany mahatonga ny steatohepatitis (NASH) tsy misy alikaola, ary ny aretin'atavy tsy misy alikaola (NAFLD).
Betsaka ankehitriny ny olona mijaly amin'io aretina mahafaty io. Ny ampahany mampatahotra momba azy dia ny mety hitarika amin'ny cirrhosis, fepetra iray mahatonga ny aty tsy miasa. Mety handratra ny homamiadan'ny ati-doha ary amin'ny tranga sasany, miteraka fahafatesana.
Ny vaovao mampalahelo momba ny NASH (steatohepatitis tsy misy alikaola) dia ny hoe tsy mifidy taona izy io ary mbola miantraika amin'ny olon-drehetra. Mbola ratsy kokoa noho izany aza, ireo famantarana ny aretina dia mety tsy miteraka soritr'aretina, ary mety tsy ho fantatry ny olona iray fa mijaly amin'ilay aretina izy ireo mandra-pivoakany amin'ny dingana manaraka.
Ny ratra sy ny fivontosana nateraky ny NASH (steatohepatitis tsy misy alikaola) mety hitarika amin'ny aretim-po sy ny havokavoka koa. Miaraka amin'ny olona marobe ankehitriny no mijaly noho io aretina io izay avy amin'ny aretin'aty tsy atakalon'ny alikaola, ny mpikaroka dia mitady safidy fitsaboana hafa ankoatry ny famindrana aty.
Ny iray amin'ireo fanafody ianarana ho an'ny fitsaboana NASH dia Elafibranor (GFT505) vovony (923978-27-2). Hatreto dia naseho fa miteraka voka-dratsy eo amin'ireo toetra roa lehibe amin'ny aretina izany, izany hoe ny balaonina sy ny fivontosana. Ny hatsaran-tarehy miaraka aminy dia afaka mandefitra be tokoa ary tsy dia mahavita miantraika amin'ny lafiny rehetra. Izany no antony nanomezan'ny Etazonia ny Sakafo sy ny Fanafody ny zava-mahadomelina azy Fitsaboana NASH.
Amin'izao fotoana izao, ny vovo-dronono Elafibranor (GFT505) dia ao amin'ny fizahana klinika Phase 3, antsoina koa hoe RESOLVE IT.
Izy io dia fanadihadiana manerantany izay nanomboka tamin'ny telovolana voalohany 2016, izay voafehy, voafehy placebo amin'ny tahan'ny 2: 1 ary jamba roa. Ny marary izay tafiditra amin'ity fandinihana ity dia ireo izay mijaly amin'ny NASH (NAS> = 4) sy ny fibrosis (dingana F2 na F3 izay efa manamarika ny fahasimban'ny atiny. Mandritra ny fandalinana dia hoentina miaraka amin'ny fatra Elafibranor (GFT505) ny marary. 120mg na placebo indray mandeha isan'andro.
Ny marary arivo voalohany hisoratra anarana dia hanampy amin'ny fampisehoana raha azo tsaboina amin'ny Elafibranor (GFT505) ny NASH nefa tsy miharatsy ny fibrosis raha oharina amin'ireo voatsabo amin'ny placebo.
Ny vohady voalohany dia nisoratra anarana tamin'ny aprily 2018, ary ny famakafakana ny valiny dia hotaterina amin'ny faran'ny taona 2019. Ny angon-drakitra voalaza dia hamaritra raha mahazo ny fankatoavan'ny US Administration ny Sakafo sy ny zava-mahadomelina i Elafibranor, mahazo fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny masoivoho fanafody Eropeana. fantatra amin'ny taona 2020.
Nandeha nandroso ny fianarana tamin'ny volana Desambra 2018 rehefa nanohana ny fitohizan'ny fitsarana ny fanohizana ny fitsapana tsy misy fanitsiana. Izany dia taorian'ny famerenana mialoha ny drafitra momba ny fiarovana natao taorian'ny telopolo volana.
Ny vokatra ho an'ny fandinihana mialoha sy klinika mialoha amin'ny fitsaboana ho an'ny NASH
Ny fahombiazana sy ny fiarovana an'i Elafibranor amin'ny fitsaboana NASH dia nodinihina tamin'ny lasa tamin'ny alàlan'ny modely aretina maro. Ao amin'ny dingana 5a 2a, fitsapana isan-karazany no natao tamin'ny isan-karazany ny marary mararin'ny aretina metabolic. Anisan'izany ireo manana diabeta karazana 2 na diabeta alohan'ny diabeta ary dislipidemia atherogenika. Nandritra ny fandalinana dia tsikaritra fa nampiroborobo i Elafibranor;
Mampihena ny aretina ateraky ny aretim-po
Ny mariky ny ratra amin'ny atiny
Ny fanoherana ny aretina manohitra
Mitombo ny fahatsapana insuline
Ny mombamomba ny lipioprotective lipid.
Ny andrana 2b izay natao tamin'ny taona 2012 no fanadinana lehibe indrindra sy ny fandalinana iraisam-pirenena voalohany natao tao amin'ny NASH. Avy eo i Elafibranor dia nahatratra ny hevitra farany natolotry ny FDA amin'ny "Fanapahan-kevitra NASH nefa tsy niharatsy ny Fibrosis." Izany no teboka voalohany amin'ny fitsapana eran-tany 3 izay mbola mitohy.
Voamarika fa ireo marary nahazo fitsaboana NASH niaraka tamin'i Elafibranor dia nanamarika ny fanatsarana ny mari-pahaizana tsy fahombiazan'ny aty toy ny ALP, GGT, ary ALT. Tamin'ny alàlan'ny fanombanana ireo teboka faharoa, dia nisy ny fandinihana fa ny dosis Elafibranor (GFT505) 120mg dia nanome vokatra ara-pahasalamana ho an'ireo trangan-javatra mety hitera-doza cardiometabolic mifandraika amin'ny NASH, Nampidirin'izy ireo;
Fanatsarana ny fihenan-tsiran'ny insuline sy metabolism glucose amin'ny marary izay voan'ny diabeta
Manatsara ny haavon'ny lipoproteins sy ny lipida ranon-dra.
Ny fahombiazan'ny Elafibranor amin'ny fitsaboana ny NASH pediatric
Ny tahan'ny fihenan'ny zaza nihanatavy dia nitombo be, ka manjary fitomboana izany. Taminà fandinihana natao tamin'ny taona 2016 dia voamarika fa NAFLD(aretin'ny atiny tsy misy alikaola) 10-20% eo ho eo amin'ny isan'ny zaza zaza. Nasehony ihany koa fa ny NAFLD amin'ny zaza dia ho antony voalohany mahatonga ny tsy fahombiazan'ny aty, ny patolojia amin'ny aty, ary ny fampidirana ny aty amin'ny zaza sy ny tanora.
Tamin'ny volana janoary 2018 dia nisy ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy ny programa pediatric NASH izay ao an-tsaina fa ny Elafibranor no fanafody tokana voaporofo fa mahomby amin'ny fitsaboana NASH amin'ny olon-dehibe ary eo am-pivoarana amin'ny fitsaboana ny ankizy.
Azo ampiasaina miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa amin'ny fitsaboana NASH ve i Elafibranor?
Efa mazava fa ny Elafibranor dia mandaitra amin'ny fitsaboana NASH rehefa ampiasaina irery. Na izany aza, noho ny fahasarotan'ny aretina dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa amin'ny fitantanana fibrosis amin'ny atiny, NASH, ary ireo mpiara-miasa aminy.
Elafibranor (GFT505) fampiasana hafa
Ao amin'ny fitsaboana cholecasis fitsaboana
Ny cholestasis dia aretina ateraky ny fahasimbana amin'ny fananganana bile sy ny fikorianany ao amin'ny gallbladder sy duodenum. Mety hitarika amin'ny fihomboan'ny aretin'ny rafitra sy aretin'aty, tsy fahombiazan'ny aty, ary na dia ny filàna famindrana aty aza. Ny fanadihadiana natao tamin'ny klinika dia naneho fa ny vovo-dronono Elafibranor (GFT505) dia mampihena ny marika biokimia ao amin'ny plasma ka manaporofo fa mety hahasoa azy amin'ny fitsaboana aretina cholestasis.
Ny diabeta dia fepetra iray vokatry ny fananana siramamy na glucose be loatra amin'ny ra. Misy fiantraikany manodidina ny efatra hetsy tapitrisa ny olona eran-tany. Ny olona iray dia mamelona diabeta karazana 2 rehefa tsy afaka mamokatra sy mampiasa normaline ny insuline ny vatany.
Ny fikarohana natao tamin'ny elafibranor dia mampiseho fa mampihena ny fivoaran'ny diabeta karazana 2 amin'ny fomba roa. Ny voalohany dia amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny metabolisma glucose ao amin'ny vatana.
Manatsara ny fahatsapana insuline amin'ny hozatra sy ny hozatra periferal izany.
Ny fandalinana Elafibranor dia tonga vaovao mahafaly ho an'izay mijaly amin'ny NASH. Rehefa notaterina am-bava tamin'ireo marary mihoatra ny valonjato mahery androany ary mampiseho fa ilaina izany dia misy ny fanantenana fa tsy voatery hijerena ny aty intsony ny olona.
Tsy nisy izany Fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina amin'ny elafibranor voamarika amin'ny sitagliptin, simvastatin, na warfarin, izay manondro fa azo ampiasaina miaraka amina fanafody hafa izy io. Elafibranor dia zaka tsara amin'ny vatana ary tsy mampiseho fiatraikany.
Fomba fikarohana momba ny fandikana ny diabeta, fihenan-tsasatra ary fatina Nonalkoholika, namboarin'i Andrew J. Krentz, Christian Weyer, Marcus Hompesch, Springer Nature, pejy 261
PPAR ao amin'ny sela finday ary - Metabolika angovo rehetra ao anaty vatana namboarin'i Walter Wahli, Rachel Tee, 457-470
Obesity sy Gastroenterology, Laharana Klinika Gastroenterology Avaratra, Octavia Pickett-Blakely, Linda A. Lee, pejy 1414-1420
1.Inona no atao hoe Elafibranor (GFT505)?
2.Elafibranor (GFT505) rafitra fiasa
3.Elafibranor (GFT505) ho an'ny fandalinana ny fitsaboana Nash
5.Ny valiny momba ny fanadihadiana mialoha sy fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny NASH
6.Ny fahombiazan'ny Elafibranor amin'ny fitsaboana NASH zaza
7.Can Elafibranor ve azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa amin'ny fitsaboana NASH?
8.Elafibranor (GFT505) fampiasana hafa
Aogositra 26, 2020